ngomphathi ku 20-04-21
I-turbocharger isebenzisa ubushushu obuphezulu obukhutshwe kwisilinda emva kokutsha ukuqhuba i-turbine cylinder impeller ukujikeleza, kwaye isiguquli kwelinye icala siqhutywa kukuthwala igobolondo eliphakathi ukujikeleza i-impeller kwelinye en ...
Uhlalutyo kunye nokuCinywa kweZiphoso eziQhelekileyo zenjini yeDiesel Turbocharger
ngomphathi ku 19-04-21
Abstract: I-Turbocharger yeyona ibaluleke kakhulu kwaye yenye yezona ndlela zisebenzayo zokuphucula amandla enjini yedizili. Njengoko uxinzelelo lokunyusa lonyuka, amandla enjini yedizili ayonyuka ngokulinganayo. Ke ngoko, xa i-turbocharger isebenza ngokungaqhelekanga okanye isilele, ...
Ezinye zeengcebiso zokugcina iiNjini eziTurbocharged
Nangona kubonakala kuyingcali kakhulu ukufuna ukusombulula ingxaki, kulungile kuwe ukuba wazi ezinye iingcebiso zokugcina iinjini ezi-turbocharged. Emva kokuba injini iqalile, ngakumbi ebusika, kufuneka ishiywe ingasebenzi kangangexesha elithile ukuze ioyile yokuthambisa ...
Ungayichonga njani iTurbocharger yakho?
Zonke i-turbocharger kufuneka zibe nelebheli yokuchonga okanye i-nameplate ekhuselweyo kwindawo engaphandle ye-turbocharger. Kukhethwa ukuba ungasinika ngolu hlobo kunye nenxalenye yenxalenye yeeturbo ezifakwe kwimoto yakho. Ngokwesiqhelo, unokuchonga itur ...
Iingcebiso ngokuSebenza kunye noKhathalelo
Yintoni elungileyo ngeTurbocharger? I-turbocharger yenzelwe ukuba ihlala ihlala ixesha elide njengenjini. Ayifuni kulondolozo olukhethekileyo; kwaye ukuhlolwa kunqunyelwe kwiitsheki ezimbalwa zamaxesha athile. Ukuqinisekisa ukuba i-turbocharger ...